အသင့်တော်ဆုံး TV အရွယ်အစားကို ရှာနည်း | Samsung MM
TV နှင့်ပတ်သက်သမျှအရာအားလုံး /
TV အရွယ်အစား ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်
သော အကြံဉာဏ်အချို့ကို ထည့်သွင်းထား
TV စခရင် အရွယ်အစားကို တိုင်းတာပုံ
သင့် TV အရွယ်အစားကို တွက်ချက်ခြင်းမှာ ထင်သလောက် မရှုပ်ထွေးပါ။ TV တစ်လုံး၏ အရွယ်အစားသည် တကယ့် TV စခရင်၏ အပေါ်ဘယ်ထောင့်မှ အောက်ညာထောင့်သို့ တိုင်းတာမှုမှ ရလာသည့် ထောင့်ဖြတ် အရှည် ဖြစ်ပါသည်။ အများစုအား လက်မဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။
အလယ်တွင် inch စကားလုံးကို ဖော်ပြထားသည့် Big Screen TV တစ်လုံး။Screenကို TV Sizeအရ တိုင်းတာရာတွင် အစက်ပါသောမျဉ်းသည် inch စကားလုံးမှ TV စခရင်၏ အပေါ်ဘယ်ထောင့်နှင့် အောက်ညာထောင့်သို့ ဆန့်ထွက်လာခြင်း။
အလွယ်နည်း- ပိုကြီးတာက ပိုကောင်းပါတယ်
TV များသည် အရွယ်အစား မျိုးစုံ ရှိသော်လည်း၊ သင့်အသုံးစရိတ်နှင့် သင့်တော်သည့် အကြီးဆုံး အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ 75 လက်မ သို့မဟုတ် ယင်းအထက် TV တစ်လုံးကို ဝယ်တော့မည်ဟု စဉ်းစားနေပါက၊ သင်သိထားရမည့် အချက်တစ်ခု ရှိပါသည်။
Samsung ကုမ္ပဏီတွင်း သုတေသနအရ၊ TV အသစ်များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ပိုကြီးသော စခရင်များကို လိုချင်၍ ဖြစ်သည်ဟုလေ့လာသိရှိရပါသည်။
ဝယ်ယူပြီးနောက်တွင်ပင်၊ စိတ်ကျေနပ်မှု အလွန်မြင့်မားကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ သင်တွေးထားသည့် စခရင် အရွယ်အစား တစ်ခုခု ရှိပါသလား။အကယ်၍ ရှိပါက၊ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မနေတော့ဘဲ စခရင်ကြီးကြီး ဝယ်လိုက်ပါ။
သင့် TV အတွက် အကြံပြုချင်တဲ့ ကြည့်ရှုရန် အကွာအဝေး
TV အားလုံးအား သင့်အိမ်တွင် နေရာချသောအခါ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုသည့် အကြံပြုထားသော အကွာအဝေးနှင့် ရှုထောင့်တစ်ခု ရှိပါသည်။ အကောင်းဆုံးနှင့် ဝန်းရံမှုအရှိဆုံး ကြည့်ရှုမှု အတွေ့အကြုံမှာ သင်၏ ကြည့်ရှုမှု မြင်ကွင်း၏ 40 ဒီဂရီအား စခရင်က ဆွဲဆောင်ချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ ဤကြည့်ရှုမှု မြင်ကွင်းအား သင့် TV ၏ အရွယ်အစားကို သိရှိယုံဖြင့် တွက်ချက်နိုင်သည်။ ဤသင့်လျော်သော အကွာအဝေးကို ရရန်၊ စခရင် အရွယ်အစားအား 1.2 ဖြင့် မြှောက်ပါ။ ထို့ကြောင့် 75 လက်မ TV အတွက်၊ 90 လက်မ သို့မဟုတ် 2.3 မီတာ အဝေးတွင် ထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်နေရာအတွက် အကောင်းဆုံး TV အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်ငှာ TV အရွယ်အစား မျိုးစုံအတွက် အကြံပြုထားသော ကြည့်ရှုမှု အကွာအဝေးများကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဖော်ပြပါ ဇယားကွက်ကို ကြည့်ပါ။
1. အမှန်တကယ် TV အတိုင်းအတာများကို စစ်ပါ။
TV အသစ်တစ်လုံး ဝယ်ယူခြင်း၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုက စတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည့် အမှန်တကယ် အလုပ်အကြောင်းကို မေ့စေနိုင်ပါသည်။ TV ဆိုတာက စခရင် အရွယ်အစား တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ စခရင်ကြီးသော TV၊ စင်နှင့် အနားဘောင်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ အခန်းတွင်း နောက်ပိုင်း နေရာချခြင်းသည် မှတ်ထားရမည့် အရေးကြီးအချက်များ ဖြစ်သည်။ သင်၏ စခရင်ကြီးသော TV ကို နေရာချရာတွင် ခေါင်းကိုက်ရခြင်း မဖြစ်စေရန် သင့်ပရိဘောဂ သတ်မှတ်မှုဖြင့် TV အတိုင်းအတာ အတိအကျကို သေချာ နှိုင်းယှဉ်ပါ။
2. အထူးသဖြင့် စခရင်ကြီးသော TV ၏ TV ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို စစ်ပါ။
စခရင် အရွယ်အစား တိုးလာသည်နှင့်၊ စုစုပေါင်း ပစ်ဇယ် အရေအတွက် သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု တိုးလာသည်မှာ အလွယ်နည်း၏ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းပါ။ ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ပိုကောင်းလေ၊ ပစ်ဇယ်များအစား ပုံရိပ်ကို သင်ပိုမြင်ရလေဖြစ််သည်။ ထို့ကြောင့် စခရင်ကြီးသော TV ကို ဝယ်ယူသောအခါ 4K ကဲ့သို့သော ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ရုပ်ပုံ အရည်အသွေးမြင့်မားသည်ကို ရွေးဝယ်ရန် အထူး အကြံပြုပါသည်။
ကြီးတာကို ဝယ်ခြင်းမှာ နောက်ပိုင်းတွင် နောင်တမရခြင်းဟု အမှတ်ရပါ။
ဖတ်ရှုပြီး နောက်ထပ် လေ့လာပါ
4K TV ဆိုတာ ဘာလဲ။
8K TV ဆိုတာ ဘာလဲ။
TV Home ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအားလုံး
SAMSUNG 70" + TVS အားလုံးကို ကြည့်ရန်